Amandla aPhezulu okufumana amanqaku | Martech Zone
Amandla aKhulu okufumana amanqaku
NgoLwesibini, Septemba 3, 2013 Lwesine, Okthobha 31, 2013 UJenn Lisak Golding
Sinayo le infographic ekusebenzeni okwethutyana, kwaye sonwabile ngokwenene ngomzekeliso kunye nomxholo. Enkosi ngentsebenziswano neqela lethu e Highbridge, yethu isoftware ezenzekelayo abaxhasi kwi-Right On Interactive (ROI), kunye neetalente ezimangalisayo zikaRyan Howe ku I-Henchmen Comic, sonwabile ukutyhila Amandla aKhulu okufumana amanqaku.
Ukukhokela amanqaku ayisiyonto intsha, kodwa i-ROI inendawo eyahlukileyo yokujonga amanqaku. Emehlweni abo, amanqaku e-3D yinto enkulu elandelayo, nolwandiso lwenqaku lokukhokela kunye nokondla ngoku. Nantsi indlela ebonakala ngayo:
Ukufumana iprofayili + Ukubandakanya amanqaku kwi-Lifecycle Stage = 3D yokufumana amanqaku
Le infographic diving kwisigaba ngasinye samanqaku e-3D kunye nendlela eya kubonelela ngayo ngombono ocacileyo wokuba yeyiphi na inqaku le-3D. Ubabeka njani amanqaku abathengi bakho kunye nethemba ngoku? Yahluke ngantoni kule modeli?
Ukuba ujonga ulwazi oluthe kratya, jonga ividiyo yabo yamva nje ukuthengisa izinto ezizenzekelayo kunye nokukhokelela ekukhuliseni. Kwaye wonwabele amagunya amakhulu ekhokelo lokufumana amanqaku!
tags: intengiso yobomi bamakhasimendeukukhokela amanqakuIntengiso yobomi bemisontoizigaba zobomi bomjikelo wobomiukuzenzekela ngokuzenzekelayoiprofayile yokufumana amanqakuekunene kunxibelelwano
Yotpo: Hlanganisa uPhononongo lwezeNtlalontle kwindawo yakho ye-Ecommerce
IiNkqubo zeSelfown eziLiguqule njani iHlabathi
Sep 3, 2013 ngo-5:21 PM
Yay! Ndiyayithanda le infographic! Umsebenzi omhle